Boqolaal ka tirsan Xoogaga Al-Shabaab oo dhoolatus milateri ku sameeyay duleedka Baraawe (Sawirro) – idalenews.com
Boqolaal ka tirsan Xoogaga Al-Shabaab oo dhoolatus milateri ku sameeyay duleedka Baraawe (Sawirro)
Boqolaal ka tirsan xoogaga Al-Shabaab ayaa dhoolatus milateri shalay ku sameeyay duleedka Degmada Baraawe ee gobolka Shabellaha Hoose, kadib markii loo soo xiray tababar.
Saraakiil ka tirsan Shabaab oo la hadlay ciidamadan ayaa ku booriyay inay qaadaan weeraro ka dhan ah ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
Boqolaalkan askari ayaa dhoolatus ku sameeyay deegaanka Ambaraasa ee duleedka Baraawe, iyagoo ku hubeysnaa gawaarida dagaalka iyo qoryaha noocyadooda kala duwan, waxaana ku jira ciidamo si qaas ah ugu tababaran shiishka meelaha fog fog.
Gudoomiyaha Al-Shabaab ee u qaabilsan Shabellaha Hoose Sheekh Maxamed Abuu Cabdalla ayaa ku dhiira geliyay ciidamada inay cadawga ugu daataan dhufeysyadooda, bedelkii weerarada ku dhufo ka dhaqaaq ay ku qaadi lahaayeen.
Dhoolatuskan milateri ee ay sameeyeen Shabaab ayaa ku soo aadaya, iyagoo wali lumiyay deegaano ka tirsan Shabellaha Hoose, waxaana todobaadyadii u dambeeyay socday qorshayaal ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM kula wareegayeen deegaano hor leh.
Augustine Mahiga oo lagu bedelay nin u dhashey Dalka Ingiriiska
Inta badan wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka magaalada Muqdisho oo saaka xiran